Streamer တှအေတှကျ Facebook Gaming ဟာ Twitch နဲ့ Youtube ထကျ ဘာလို့ ပိုကျဆံပိုရှာနိုငျတာလဲ? – Gaming Noodle
Streamer တှအေတှကျ Facebook Gaming ဟာ Twitch နဲ့ Youtube ထကျ ဘာလို့ ပိုကျဆံပိုရှာနိုငျတာလဲ?
ဗီဒီယိုဂိမျးဈေးကှကျတနျဖိုးဟာ ကနျဒျေါလာ ၁၂၀ ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ကွောငျး ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက စဈတမျးမြားမှာ ဖျောပွထားခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီဈေးကှကျတနျဖိုးကို ရရှိတာဟာ ဗီဒီယိုဂိမျးမဟုတျပဲ နိုငျငံတဈနိုငျငံသာ ဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ ကမ်ဘာ့ထိပျဆုံး GDP ရရှိတဲ့နိုငျငံ ၁၀၀ စာရငျးမှာ ပါဝငျနမှောဖွဈပါတယျ။
ဒီဈေးကှကျတနျဖိုးဟာ အရငျလို ဂိမျးကစားသူတှကေ ဂိမျးကို ဝယျယူကစားရုံသကျသကျကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာတာ မဟုတျတော့ပါဘူး။ Streaming platform မြားပျေါက အလှနျမြားပွားလာတဲ့ ဂိမျးကွညျ့ရှုသူမြားဟာ streamer မြားကို လှူတနျးနကွေတဲ့ ငှကွေေးတနျဖိုးမြားလညျး ပါဝငျပါတယျ။
ထိပျဆုံးနရောမှာ ရပျတညျနတေဲ့ ဂိမျး streaming platform တှကေတော့ Amazon ကုမ်ပဏီက ပိုငျဆိုငျတဲ့ Twitch, Google ရဲ့ YouTube နဲ့ Microsoft ရဲ့ Mixer တို့ပါ။
Facebook Gaming နဲ့ ပထမဆုံး ပူပေါငျးခဲ့သညျ့ Streamer မြား
၂၀၁၈ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီက စတငျလို့ Facebook ဟာလညျး Facebook Gaming လို့ အမညျပေးထားတဲ့ ဂိမျး streaming platform တဈခုကို စတငျခဲ့ပါတယျ။ Facebook ဟာ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး social media network အဖွဈရပျတညျနတောမို့ Facebook Gaming ကို အသုံးပွုသူမြားဟာလညျး တဈဟုနျထိုးမြားပွားလာခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၉ ဧပွီလ၊ မလေ နဲ့ ဇှနျလတို့မှာ ကောကျယူခဲ့တဲ့ စာရငျးဇယားမြားအရ Facebook Gaming ပျေါမှာ ပုံမှနျအသုံးပွုနတေဲ့ streamer ပေါငျး ၁၅၃,၀၀၀ ကြျော ရှိပါတယျ။ ဒီအရအေတှကျဟာ စကျတငျဘာလအတှငျး စဈတမျးအရ streamer ၃ သနျးကြျောအထိ ရှိနတေဲ့ Twitch ကိုတော့ မမီသေးပါဘူး။ Twitch ဟာ YouTube Gaming နဲ့ Mixer တို့ထကျလညျး ကွညျ့ရှုတဲ့ နာရီအရအေတှကျရော stream လှငျ့တဲ့ နာရီအရအေတှကျပါ သာလှနျလကျြရှိပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Facebook Gaming ဟာ အခွား platform မြားထကျ streamer ကို ပိုကျဆံပိုရစနေိုငျတဲ့အခကျြမြား ရှိပါတယျ။ အဓိကအခကျြတဈခကျြကတော့ ကွညျ့ရှုသူမြားပွားစှာနဲ့ မွနျဆနျစှာ ရရှိခွငျးပါ။ Facebook ပျေါက gaming group မြားနဲ့ မိမိရဲ့ timeline ပျေါကို stream မြား share ပွုလုပျနိုငျခွငျးဟာ အခွား platform မြားထကျ ကွညျ့ရှုသူ ပရိသတျမြားပွားလာအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျတဲ့ အားသာခကျြဖွဈပါတယျ။
“ကြှနျတေျာ့ကို အားပေးကွညျ့ရှုသူ ပရိသတျမြားထဲမှာ ဂိမျးကစားလမေ့ရှိသူတှလေညျး အမွောကျအမြား ပါဝငျပါတယျ။” လို့ Facebook Gaming ပျေါက streamer တဈဦးဖွဈတဲ့ Darkness429 က ပွောပါတယျ။ သူဟာ လကျရှိမှာ follower ပေါငျး ၅၅၀,၀၀၀ ကြျော ရရှိထားသူတဈဦးပါ။ First incoming class of partnered streamers အဖှဲ့ဝငျတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။
Darkness429 ကို Twitch ပျေါကနေ ပွောငျးလာအောငျ Facebook က ချေါယူခဲ့တာပါ။ သူဟာ Facebook Gaming ပျေါက သူရဲ့ live streaming ကို ၂၀၁၈ ဖဖေျောဝါရီလမှာ စတငျခဲ့ပါတယျ။ Twitch ပျေါမှာ stream ခဲ့တဲ့ လေးနှဈအတှငျး follower ၁၆၀,၀၀၀ ကြျောသာရရှိခဲ့ပမေယျ့ Facebook Gaming မှာတော့ ပထမတဈနှဈအတှငျးမှာတငျ follower ၅၅၀,၀၀၀ ကြျော ရရှိခဲ့တယျလို့ သူကပွောပါတယျ။
“Twitch ပျေါမှာ ရှိနစေဉျကထကျ Facebook ပျေါမှာ ပိုကျဆံပိုရပါတယျ။ အသကျ ၂၀ ကြျောကနေ ၃၀ ကြျောအထိရှိကွတဲ့ ပရိသတျတှေ လာကွညျ့ကွပွီး ဒီအသကျအရှယျတှမှော လူအမြားဟာ ဝငျငှကေောငျးနဆေဲဖွဈလို့ပါ။ နောကျပွီး Facebook ပျေါက ပရိသတျတှဟော Twitch ထကျ ပိုရကျရောကွတယျလို့လညျး ကြှနျတျောထငျတယျ။” လို့ Darkness429 က ပွောပါတယျ။
Facebook Gaming ပျေါက ပရိသတျတှဟော ပိုရကျရောတယျဆိုတာကို ထောကျခံတဲ့သူနောကျတဈယောကျကတော့ Its Noob လို့ အမညျရတဲ့ PUBG Mobile streamer တဈဦးပါ။ သူဟာ တဈနကေို့ ၈ နာရီကနေ ၁၂ နာရီအထိ stream လှငျ့လရှေိ့ပွီး follower ၂၈၀,၀၀၀ ကြျော ရရှိထားပါတယျ။
သူဟာ multi-streaming service ကို အသုံးပွုပွီး Facebook Gaming နဲ့ Twitch နှဈခုလုံးပျေါမှာ တဈပွိုငျတညျး stream လှငျ့လရှေိ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူဟာ Facebook Gaming ပျေါက ပရိသတျမြား ပိုရကျရောကွောငျး နှိုငျးယှဉျပွောနိုငျတာပါ။ အခွား platform မြား ပျေါမှာထကျ Facebook Gaming ပျေါမှာ အကောငျ့အစဈမြားကို ပိုသုံးကွလို့ ဒီလိုရကျရောကွတာဖွဈတယျလို့ Its Noob က ယူဆပါတယျ။
Yo Mama လို့ အမညျရတဲ့ Facebook ပခြေျ့ကို ပိုငျဆိုငျတဲ့ Zack James ဆိုသူကလညျး Facebook ပျေါမှာ ပိုကျဆံပိုရကွောငျး ပွောခဲ့ပါသေးတယျ။ Yo Mama ဟာ follower ၄ သနျးကြျော ရရှိထားသလို Zack James ရဲ့ Facebook Gaming stream ဟာလညျး follower ၃.၅ သနျးကြျော ရရှိထားပါတယျ။ Zack James ဟာ Grand Theft Auto V လို ဂိမျးမြားကို ကစားလရှေိ့သူတဈဦးပါ။
Zack James ခဲ့တဲ့အကွောငျးကတော့ Facebook ဗီဒီယို ads မြားကနေ ရတဲ့ဝငျငှဟော Youtube ဗီဒီယို ads မြားထကျ ပိုမြားကွောငျးပါ။ ၁၀ မိနဈကွာခြိနျရှိတဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတဈခုကို ပွုလုပျတာထကျ ၃ မိနဈစာ Facebook ဗီဒီယိုတဈခုပွုလုပျတာက ads ဝငျငှေ ၂ ဆ ၃ ဆလောကျ ပိုရတယျလို့ သူက ပွောပါတယျ။
လကျရှိမှာ Facebook Gaming ဟာ app ကို တဈခုကို ဖိလဈပိုငျ၊ ဘရာဇီး နဲ့ မကျဆီကိုနိုငျငံမြားမှာ စမျးသပျဖွနျ့ခြိလကျြ ရှိပါတယျ။ ယငျး app ထှကျရှိခြိနျရောကျရှိလာရငျလညျး Facebook Gaming ကို အသုံးပွုသူ ပိုမိုမြားပွားလာနိုငျခွရှေိသလို ယငျးပျေါမှာ stream ခွငျးကနေ ရရှိနိုငျမယျ့ ဝငျငှဟောလညျး ယခုထကျ ပိုမိုမြားပွားလာနိုငျပါတယျ။ Facebook Gaming ပျေါမှာ stream ခွငျးဟာ အခွား platform မြားထကျ ဝငျငှကေောငျးလကျြရှိကွောငျး ဗဟုသုတအဖွဈတငျဆကျလိုကျရပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
Streamer တွေအတွက် Facebook Gaming ဟာ Twitch နဲ့ Youtube ထက် ဘာလို့ ပိုက်ဆံပိုရှာနိုင်တာလဲ?
ဗီဒီယိုဂိမ်းဈေးကွက်တန်ဖိုးဟာ ကန်ဒေါ်လာ ၁၂၀ ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က စစ်တမ်းများမှာ ဖော်ပြထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဈေးကွက်တန်ဖိုးကို ရရှိတာဟာ ဗီဒီယိုဂိမ်းမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံး GDP ရရှိတဲ့နိုင်ငံ ၁၀၀ စာရင်းမှာ ပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဈေးကွက်တန်ဖိုးဟာ အရင်လို ဂိမ်းကစားသူတွေက ဂိမ်းကို ဝယ်ယူကစားရုံသက်သက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Streaming platform များပေါ်က အလွန်များပြားလာတဲ့ ဂိမ်းကြည့်ရှုသူများဟာ streamer များကို လှူတန်းနေကြတဲ့ ငွေကြေးတန်ဖိုးများလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ ဂိမ်း streaming platform တွေကတော့ Amazon ကုမ္ပဏီက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Twitch, Google ရဲ့ YouTube နဲ့ Microsoft ရဲ့ Mixer တို့ပါ။
Facebook Gaming နဲ့ ပထမဆုံး ပူပေါင်းခဲ့သည့် Streamer များ
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီက စတင်လို့ Facebook ဟာလည်း Facebook Gaming လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဂိမ်း streaming platform တစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ Facebook ဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး social media network အဖြစ်ရပ်တည်နေတာမို့ Facebook Gaming ကို အသုံးပြုသူများဟာလည်း တစ်ဟုန်ထိုးများပြားလာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၉ ဧပြီလ၊ မေလ နဲ့ ဇွန်လတို့မှာ ကောက်ယူခဲ့တဲ့ စာရင်းဇယားများအရ Facebook Gaming ပေါ်မှာ ပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့ streamer ပေါင်း ၁၅၃,၀၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ ဒီအရေအတွက်ဟာ စက်တင်ဘာလအတွင်း စစ်တမ်းအရ streamer ၃ သန်းကျော်အထိ ရှိနေတဲ့ Twitch ကိုတော့ မမီသေးပါဘူး။ Twitch ဟာ YouTube Gaming နဲ့ Mixer တို့ထက်လည်း ကြည့်ရှုတဲ့ နာရီအရေအတွက်ရော stream လွှင့်တဲ့ နာရီအရေအတွက်ပါ သာလွန်လျက်ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Facebook Gaming ဟာ အခြား platform များထက် streamer ကို ပိုက်ဆံပိုရစေနိုင်တဲ့အချက်များ ရှိပါတယ်။ အဓိကအချက်တစ်ချက်ကတော့ ကြည့်ရှုသူများပြားစွာနဲ့ မြန်ဆန်စွာ ရရှိခြင်းပါ။ Facebook ပေါ်က gaming group များနဲ့ မိမိရဲ့ timeline ပေါ်ကို stream များ share ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဟာ အခြား platform များထက် ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်များပြားလာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော့်ကို အားပေးကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်များထဲမှာ ဂိမ်းကစားလေ့မရှိသူတွေလည်း အမြောက်အများ ပါဝင်ပါတယ်။” လို့ Facebook Gaming ပေါ်က streamer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Darkness429 က ပြောပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိမှာ follower ပေါင်း ၅၅၀,၀၀၀ ကျော် ရရှိထားသူတစ်ဦးပါ။ First incoming class of partnered streamers အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Darkness429 ကို Twitch ပေါ်ကနေ ပြောင်းလာအောင် Facebook က ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ သူဟာ Facebook Gaming ပေါ်က သူရဲ့ live streaming ကို ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ Twitch ပေါ်မှာ stream ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်အတွင်း follower ၁၆၀,၀၀၀ ကျော်သာရရှိခဲ့ပေမယ့် Facebook Gaming မှာတော့ ပထမတစ်နှစ်အတွင်းမှာတင် follower ၅၅၀,၀၀၀ ကျော် ရရှိခဲ့တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
“Twitch ပေါ်မှာ ရှိနေစဉ်ကထက် Facebook ပေါ်မှာ ပိုက်ဆံပိုရပါတယ်။ အသက် ၂၀ ကျော်ကနေ ၃၀ ကျော်အထိရှိကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ လာကြည့်ကြပြီး ဒီအသက်အရွယ်တွေမှာ လူအများဟာ ဝင်ငွေကောင်းနေဆဲဖြစ်လို့ပါ။ နောက်ပြီး Facebook ပေါ်က ပရိသတ်တွေဟာ Twitch ထက် ပိုရက်ရောကြတယ်လို့လည်း ကျွန်တော်ထင်တယ်။” လို့ Darkness429 က ပြောပါတယ်။
Facebook Gaming ပေါ်က ပရိသတ်တွေဟာ ပိုရက်ရောတယ်ဆိုတာကို ထောက်ခံတဲ့သူနောက်တစ်ယောက်ကတော့ Its Noob လို့ အမည်ရတဲ့ PUBG Mobile streamer တစ်ဦးပါ။ သူဟာ တစ်နေ့ကို ၈ နာရီကနေ ၁၂ နာရီအထိ stream လွှင့်လေ့ရှိပြီး follower ၂၈၀,၀၀၀ ကျော် ရရှိထားပါတယ်။
သူဟာ multi-streaming service ကို အသုံးပြုပြီး Facebook Gaming နဲ့ Twitch နှစ်ခုလုံးပေါ်မှာ တစ်ပြိုင်တည်း stream လွှင့်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ Facebook Gaming ပေါ်က ပရိသတ်များ ပိုရက်ရောကြောင်း နှိုင်းယှဉ်ပြောနိုင်တာပါ။ အခြား platform များ ပေါ်မှာထက် Facebook Gaming ပေါ်မှာ အကောင့်အစစ်များကို ပိုသုံးကြလို့ ဒီလိုရက်ရောကြတာဖြစ်တယ်လို့ Its Noob က ယူဆပါတယ်။
Yo Mama လို့ အမည်ရတဲ့ Facebook ပေ့ခ်ျကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Zack James ဆိုသူကလည်း Facebook ပေါ်မှာ ပိုက်ဆံပိုရကြောင်း ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ Yo Mama ဟာ follower ၄ သန်းကျော် ရရှိထားသလို Zack James ရဲ့ Facebook Gaming stream ဟာလည်း follower ၃.၅ သန်းကျော် ရရှိထားပါတယ်။ Zack James ဟာ Grand Theft Auto V လို ဂိမ်းများကို ကစားလေ့ရှိသူတစ်ဦးပါ။
Zack James ခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့ Facebook ဗီဒီယို ads များကနေ ရတဲ့ဝင်ငွေဟာ Youtube ဗီဒီယို ads များထက် ပိုများကြောင်းပါ။ ၁၀ မိနစ်ကြာချိန်ရှိတဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ပြုလုပ်တာထက် ၃ မိနစ်စာ Facebook ဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်တာက ads ဝင်ငွေ ၂ ဆ ၃ ဆလောက် ပိုရတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာ Facebook Gaming ဟာ app ကို တစ်ခုကို ဖိလစ်ပိုင်၊ ဘရာဇီး နဲ့ မက်ဆီကိုနိုင်ငံများမှာ စမ်းသပ်ဖြန့်ချိလျက် ရှိပါတယ်။ ယင်း app ထွက်ရှိချိန်ရောက်ရှိလာရင်လည်း Facebook Gaming ကို အသုံးပြုသူ ပိုမိုများပြားလာနိုင်ခြေရှိသလို ယင်းပေါ်မှာ stream ခြင်းကနေ ရရှိနိုင်မယ့် ဝင်ငွေဟာလည်း ယခုထက် ပိုမိုများပြားလာနိုင်ပါတယ်။ Facebook Gaming ပေါ်မှာ stream ခြင်းဟာ အခြား platform များထက် ဝင်ငွေကောင်းလျက်ရှိကြောင်း ဗဟုသုတအဖြစ်တင်ဆက်လိုက်ရပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။